कसरी ट्विटर चलनहरूको फाइदा लिने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
ट्विटरको एक उत्तम सुविधाहरू प्रचलित छ। वास्तवमा, यो मुख्य कारण हो कि ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूले यस मञ्चलाई दिनको सुरूमा पहिलो स्थानमा प्रवेश गर्छन्। आज सबैभन्दा लोकप्रिय शीर्षकहरूको बारेमा पत्ता लगाउन।
यी प्रवृत्तिहरूले कसरी काम गर्छन्?
ट्विटर प्रवृत्ति प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताहरूको क्षणहरूको बारेमा अधिक चर्चा हुन्छन्। यी प्रवृत्तिमा उही विषयको बारेमा कुरा गर्ने ट्वीट्सको ठूलो मात्रा समावेश गर्दछ.
अर्को शब्दमा, कुनै पनि समयमा सयौं व्यक्तिले उही विषयवस्तुमा टिप्पणी गरिरहेका छन् जुन प्रायः क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्त्वको साथ एक समाचार घटना हो। ट्वीट्स आन्दोलन तिनीहरू घण्टाको मामलामा एक मिलियन भन्दा बढि पोष्टहरू पनि सामेल गर्न सक्दछन्, जुन दिनहरू फ्याँक्न सकिन्छ।
यिनीहरू प्रयोगकर्ता खातामा मुख्य रूपमा खाताको भौगोलिक स्थान द्वारा प्रदर्शित हुन्छन्। तपाईंको खाता ईन्टरफेसको बाँया पट्टि मेनूमा तपाईंले दिनका सबै प्रचलनहरू फेला पार्नुहुनेछ।
यी प्रवृत्तिसँग एक अनुमान सूत्र छ
प्लेटफर्म भित्र, एक एल्गोरिथ्म केहि तथ्यात्मक तत्त्वहरूमा आधारित प्रवृत्ति गणना गर्दछ। सामान्यतया सबै ट्वीटहरू जुन एउटै चीजसँग डिल गर्दछ, ती प्रयोगकर्ताहरूको भौगोलिक स्थान, साथै उनीहरूको रूचिसँग सम्बन्धित छ।
तपाइँ तपाइँको ट्विटर खातामा प्रचलनहरू कहाँ पाउनुहुन्छ?
जब तपाईं मोबाइल प्लेटफर्म मार्फत तपाईंको खाता प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, तलका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
एकचोटि तपाईंले आफ्नो ट्विटर खाता प्रविष्ट गर्नुभयो, तपाईंले आइकन पत्ता लगाउनु पर्छ जुन म्याग्निफाइ glass गिलास जस्तो आकारको छ। यो पर्दाको तल छ। यसले तपाइँलाई दुबै ट्वीट र प्रयोगकर्ता खाताहरू फेला पार्न अनुमति दिन्छ।
यो प्रतिमा थिचे पछि, प्रणालीले तपाईंलाई खोजी बक्सको साथ इन्टरफेसमा निर्देशित गर्दछ। कुनै पनि प्रकारको खोजी राख्न आवश्यक पर्दैन, जब देखि यो सेक्सन पहुँच गर्दा, तपाइँले पल को प्रवृत्तिको सूची पाउनुहुनेछ।
प्रवृत्ति खोज्नुहोस् जुन तपाईको ध्यान आकर्षण गर्‍यो। जब तपाइँले त्यो गर्नुभयो, तपाइँ प्रवृतिमा समूहीकृत सबै ट्वीटहरू देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईं सबैभन्दा भर्खरको र सुविधित ट्वीटहरू, फोटोहरू, भिडियोहरू र प्रयोगकर्ता खाताहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
जब तपाइँ वेब प्लेटफर्मको माध्यमबाट तपाइँको खाता प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, तलका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
ट्विटर वेबसाइटमा तपाइँको मनपर्ने खोजी ईन्जिनको साथ जानुहोस् र लग इन गर्नुहोस्।
तपाईको खाताको पहिलो इन्टरफेसमा तपाईको टाईमलाईनमा सबै भर्खरका ट्वीटहरू भेट्टाउनुहुनेछ। यसको बाँया भाग तर्फ, त्यो क्षणको सबै प्रवृत्ति सूचीको रूपमा हुनेछ, यसमा समूहबद्ध गरिएको ट्वीटहरूको संख्यासँगै।
तपाईंको आँखा समात्ने जो कोहीलाई क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं अन्तिम रेखाको शुरुवातमा शब्दहरूको साथ फेला पार्नुहुनेछ जसले यस प्रवृत्तिलाई कालोमा हाइलाइट गर्‍यो।
ह्यासट्यागहरू समूह ट्वीट गर्न प्रयोग गरिएको एउटा कार्य हो जुन समान चीजको साथ काम गर्ने छ, त्यसैले तिनीहरू प्रवृत्तसँग नजिकबाट सम्बन्धित छन्। ती शब्दहरूको सुरूमा पाउण्ड प्रतीक (#) को आकारमा छन् जुन ट्विटमा वर्णनात्मक पाठको रूपमा काम गर्दछ।
त्यसकारण जब यो प्रवृत्तिहरू निर्धारण गर्न आउँछ, ट्विटरले सबै ह्यासट्याग र मिल्दो शब्दहरूको खोजी गर्दछ, यी सबै ट्वीटहरूको अवलोकन गर्न।
1 यी प्रवृत्तिहरूले कसरी काम गर्छन्?
2 यी प्रवृत्तिसँग एक अनुमान सूत्र छ
3 तपाइँ तपाइँको ट्विटर खातामा प्रचलनहरू कहाँ पाउनुहुन्छ?
4 ह्याशट्यागको प्रयोग